सात वर्षदेखि स्वास्थ्यचौकीको भवन अलपत्र – Sajha Bisaunee
सात वर्षदेखि स्वास्थ्यचौकीको भवन अलपत्र
। ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०५:०१ मा प्रकाशित
सुर्खेत : चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको अवलचिङ्ग प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको हो । वि.सं. २०६९ असार ६ गते स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणका लागि फ्रेण्ड्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई करोड ५० लाख ४६ हजार आठ सय ७४ रूपैयाँ बजेटमा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको हो । जसका लागि करबाहेक ५९ लाख ७१ हजार नौ सय ७६ रूपैयाँ भुक्तानी पनि कम्पनीले लगिसकेको छ । स्वास्थ्यचौकीको तीन वटा ब्लक निर्माणमध्ये हालसम्म दुुई वटा ब्लकको भवनको ढलान मात्र गरिएको छ भने एउटा ब्लकको भवनको वाल मात्र लगाइएको छ । कर्मचारीका लागि बनाउने भनिएको क्वाटर र एउटा शौचालयको निर्माण कार्य भने सुरु भएको छैन । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले समयमै स्वास्थ्य संस्था बन्न नसकेको हो ।
स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव शान्तिप्रसाद उपाध्यायले विगत डेढ वर्षदेखि भवनको काम अलपत्र रहेको जानकारी दिए । भवन अभावमा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । कोठाको अभावमा कोलिया बारेर कोठा बनाई सेवा दिनुुपरेको उपाध्यायले बताए । पूरानो भवनमा आठ वटा कोठा मात्र छन् । एउटा कोठामा तीन वटा बेड राखेर स्वास्थ्यचौकीले आपतकालीन सेवा दिँदै आएको छ । तर टाढाबाट बिरामी आउँदा स्वास्थ्यचौकीमै राखेर उपचार गर्न समस्या हुुने गरेको उनले जानकारी दिए । भवन अभावले गर्दा बिरामीलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न समेत समस्या हुुने गरेको उनको भनाइ छ । कोठा अभावमा फार्मेसी कोलिया बारेर राखिएको छ । ‘भवन पूरानो हुुँदै गएको छ । भएका कोठा पर्याप्त छैनन् । कुनै बिरामीलाई हामीले छुुट्टै कोठामा राखेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ’ उपाध्यायले भने, ‘न स्वास्थ्य चौकीमा भएका सामग्री राख्ने ठाउँ छ ।’
स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर रानाले ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माण कार्य रोकिएको बताए । ठेकेदारले बीचमै काम छोडिदिँदा भवन निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै उनले यसको काम छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे । भवन निर्माण गर्दा काम गरेका कामदारले हालसम्म पनि ज्याला पाएका छैनन् । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रानाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सात लाख ७९ हजार रूपैयाँ कामदारहरूलाई ज्याला दिन बाँकी रहेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय सुर्खेतले अब ठेक्का तोडेर फेरि काम सुरु गर्ने जनाएको छ । कार्यालयका सव–इन्जिनियर नरेन्द्र बुुढाले निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा रहेको जनाए । कार्यालयले गत हप्ता स्वास्थ्यचौकीको हालसम्म भएको कामको मूल्यांकन गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम अलपत्र छोडेको र सन्तोषजनक रूपमा काम नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने र वैकल्पिक उपायबाट कार्य सम्पन्न गराउने विभागीय कार्यविधि अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।
भवन अभावको समस्या झेलिरहेको स्वास्थ्यचौकीले हाल ओपीडी सेवा, इमरजेन्सी सेवा दिदैँ आएको छ । एक्सरे, ल्याबको सेवा पनि स्वास्थ्यचौकीले दिँदै आएको छ । तर डाक्टरको अभावमा विगत सात महिनादेखि भिडियो एक्सरेको सेवा दिन नसकेको अहेव उपाध्यायले जानकारी दिए । समायोजनका क्रममा डाक्टर अन्यत्र सरुवा भएपछि अहिले कोही पनि डाक्टर नआएको उनले जनाए । डाक्टर नहुुँदा र एक्सरेको काम नहुुने भएपछि सेवाग्राही पहिलेको तुलनामा कम आएको उपाध्यायले जानकारी दिए । दैनिक २५ जना बिरामी अझै पनि आउने गर्छन् । डाक्टर नहुुँदा बिरामीलाई वीरेन्द्रनगर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उक्त स्वास्थ्यचौकीमा चिङ्गाड गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगरको वडा नं. १६, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र सुर्खेतसँग सिमाना जोडिएको जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका नागरिकहरू उपचारका लागि पुग्ने गर्दछन् ।